घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू रुबेन डायस बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो रुबेन डायस बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन, नेट वर्थ, जीवनशैली, र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
वास्तवमा भन्ने हो भने, हामीसँग यहाँ छ; आफ्नो जीवनको कहानी को एक पूर्ण ब्रेकडाउन, शुरुआती दिन देखि जब उहाँ प्रसिद्ध बने। उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय हेर्नुहोस्, रुबेन डायस बायोको स्पष्ट सार।
हो, खेल प्रेम धेरै उहाँलाई थाहा थिएन जब सम्म पेपको उनलाई शहर लाने धक्का। फेरि, केहि प्रशंसकहरूले रुबेन डायसको जीवनी पढ्न समय निकालेका छन्। हामीले त्यो तयारी गर्यौं र यो साँच्चै चाखलाग्दो छ। ढिलाइ नगरी, सुरु गरौं।
रुबेन डायस बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ उपनाम राख्नुहुन्छ रूबी र पूरा नाम- रुबेन डोस सान्तोस गाटो अल्वेस डायस। पोर्तुगाली फुटबलर मे १ 14 1997 of मा १ father औं दिन उनका बुबा जोआओ डायस र पोर्चुगलको अमाडोरा शहरमा थोरै ज्ञात आमामा जन्मेका थिए।
रुबेन डायस बढ्दो वर्ष:
युवा 'रुबी' लिस्बन महानगरीय क्षेत्रमा उसको घरको कोरिडोरमा फुटबल खेलेका थिए र ठूलो भाइ इभानसँगै। डायस आमा र बुबासँग त्यो एक्लै थिएन। उहाँसँग दुई सुन्दर बहिनीहरू, बेटिएक्स र क्यारोलिना पनि छन् जससँग उनी हुर्केका थिए।
त्यो घर जसमा सोकर उडन्ता र उसको भाइ हुर्कियो लिस्बनको उत्तरमा मात्र छ। पोर्चुगलमा सत्ताको सिटको नजिक हुनु भनेको रुबेन डायसका अभिभावक कम्तिमा पनि मध्यमवर्गीय नागरिक थिए भन्ने कुराको संकेत हो। बढी, उनको जीवन कहानी धनी दास्ताहरु को लागी rag को रहित छ।
रुबेन डायस पारिवारिक उत्पत्ति:
Newbies को लागी, फुटबल प्रतिभा पुर्तगाली नागरिक हो। उनको रुबेन डायस परिवार मूल बारे थप जान्नको लागि, हाम्रो टीमले गहिरो जाने निर्णय गर्यो। हाम्रो अनुसन्धानको परिणामले देखाउँदछ कि उसको परिवारको पुर्ख्यौली पश्चिमी पोर्चुगलको अमाडोरामा पत्ता लागेको छ।
रुबेन डायस फुटबल कहानी:
भाग्य, पहिलो स्थानमा, शुरू भयो - सबै साथीलाई धन्यवाद। Of बर्षको उमेरमा, जवान रुबीलाई नजिकको परिवारको साथीले CF Estrela da Amadora लगियो। यो क्लब मा उनले संगठित फुटबल मा आफ्नो पहिलो कदम चालेको थियो। शुरुमा उनले २००9मा स्ट्राइकरको रूपमा शुरू गरे। यद्यपि समय बित्दै जाँदा उनी केन्द्रमा फर्केनन्। अब यहाँ प्यारा रुबी छ, उसले CF एस्ट्रेला दा अमाडोराको साथ क्यारियर फुटबल शुरू गरेको दुई वर्ष पछि।
दुई वर्ष पछि (२००)), रुबेन डायस अभिभावकहरूले आफ्नो छोरालाई बेनिफिका एकेडेमीमा ट्रायलको लागि लगे। बितिसकेपछि र क्लबमा प्रवेश प्राप्त गर्दै, जवान केटालाई मिडफिल्डमा खेल्न भनियो। त्यतिखेर ऊसँग सेन्टरको फिजिकलिटी थिएन। डायसले बृद्धि बढाउने बित्तिकै उहाँ अन्ततः केन्द्रमा फर्कनुभएन। यस समयमा उनी क्लबको क्रममा छिटो उठ्न थाले।
रुबेन डायस जीवनी - प्रख्यात कथाको मार्ग:
उनका जन्मजात नेतृत्वका गुणहरूका लागि धन्यबाद, उनी खेलेको प्रत्येक उमेर समूहका कप्तान थिए। वास्तवमा, डायस पिचमा साथै ड्रेसिंग कोठामा कोचको आवाज थियो। केवल उनको अनुहार हेरेर, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि उहाँ वास्तवमै निर्माणमा एक नेता हुनुहुन्थ्यो।
आफ्नो युवा जीवनको चरम चोटीमा, डायसले २०१ Ben मा बेनिफिका बी पक्षको साथ आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गरे। अपेक्षित रूपमा, उनले उनीहरूलाई दोस्रो डिभिजनमा ऐतिहासिक चौथो स्थानमा पुग्न सहयोग गरे। पछि, पेपको सीबीले जुनियर टीमलाई २०१––१– यूईएफए युवा लिगको फाइनलमा पुग्न मद्दत गर्‍यो।
रुबेन डायस सफलताको कहानी:
जब फुटबल प्रतिभाले २०१ 2017 मा बेनिफिकाको पहिलो टोलीको पदोन्नति प्राप्त गर्‍यो, उनलाई प्रिमिरा लीगाको युवा प्लेयर अफ द इयर घोषित गरियो। त्यस पछिका मौसमहरूमा उनले द ईगल्सलाई लिग खिताब (२०१––१ season १ season सत्र) जित्न मद्दत गरे र पछि सुपरटाका सिन्डिडो डे ओलिभिरा (२०१––२०१ season सीजन)। साथै, लीगले उनलाई प्राइमिर लीगाको टोली अफ द इयर २०१ in मा नाम दियो।
यो जीवनी लेख्ने समयको लागि छिटो फर्वार्ड, म्यानचेस्टर सिटीले केन्द्रका सेवाहरू सुरक्षित राखेको छ पूर्व कप्तानले छोडेको प्रतिरक्षा शून्य भिन्सेन्ट कम्पनी। यो निश्चित रूपमा लामो समय हुँदैन जब उसले इतिहाद स्टेडियममा आफ्नै देशवासीहरूको जस्तै स्थापित गर्दछ योओ रद्दीटोन र बर्नार्डो सिल्भा।
रुबेन डायस गर्लफ्रेंड को हो?
गुलाब रातो छ, म्यान्चेस्टर शहर निलो छ, मारियाना गोन्काल्भ्स उनको नाम हो र ऊ मायामा छ। के तपाईंले अघिल्लो वाक्यमा रुबेन डायसको प्रेमिकाको नाम बुझ्नुभयो? हामी शर्त गर्दछौं कि तपाईंले गर्नुभयो।
रुबेन डायस प्रेमिका आइवी अप्रिल को स्टेज नामको साथ लोकप्रिय छ। उनी एक पप गायिका हुन् जसले सन् २०१ 2018 मा रोमान्टिक रूपमा सेन्टरमा संलग्न भएकी थिइन्। तिनीहरू सँगसँगै बलियो हुँदै गइरहेका छन् र सम्भवतः ऐसलमा हिंड्ने योजनाहरू छन्। तलको फोटोबाट तपाई अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ कि रुबेन डायस र तिनकी पत्नीले एकपटक आफ्नो बिदामा कति खर्च गरे।
रुबेन डायस पारिवारिक जीवन:
प्रत्येक केन्द्र पछाडि एक कहानी छ जसमा व्यक्तिहरूका चराहरू समावेश हुन्छन् जुन उनीहरू सबै भन्दा बढि माया गर्दछन्। को आफ्नो परिवार भन्दा अधिक फुटबलर को कदर गर्दछ? हामी तपाईलाई रुबेन डायस अभिभावक र भाईबहिनीको बारेमा तथ्य ल्याउँदछौं। साथै, तिनका आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू यहाँ उपलब्ध गराइनेछ।
रुबेन डायस अभिभावकको बारेमा:
सुरु गर्न, हामी डिफेन्डरको बुबा र आमाको बारेमा कुरा गरौं। जोआओ डायस डिफेन्डरको बुबा हो। उनी आफ्नो छोरामा ठूलो गर्व राख्छन् जसले बेन्फीकाको लागि एक दिन यस्तो सुविधा ल्याउनेछन भनेर सोचेका थिएनन, यसलाई प्रिमियर लिगमा बनाउने कुरा गर्थे। उसको बुवालाई हेर, जसै उनले २० 2020० को जनवरी तिर उनको जन्मदिन मनाए। के तपाई उसलाई भेट्न सक्नुहुन्छ?
यस बीच, रुबीको आमाको बारेमा धेरै जानकारी छैन। जे होस्, हामी विश्वस्त छौं कि डायसले ती दुवै बीचको सम्बन्धलाई उचित समयमा प्रकट गर्नेछ। विशेष गरी कसरी उनी फुटबलमा उसको बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले। रुबेन डायसका एकजना आमा-बुबालाई भेट्नुहोस्।
रुबेन डायस भाई बहनहरूको बारेमा:
पोर्तुगालीको दाजु र दुई बहिनीहरू छन्। प्रारम्भमा, हामीले अघिल्लो पटक भनेका थियौं कि ऊ एक जेठो भाई इभान डायससँगसँगै मायालु फुटबलमा हुर्कियो। उनी एक समर्थक फुटबलर पनि हुन् जसले पुर्तगाली तेस्रो-स्तर क्लब ओरिएन्टल लिस्बोवाको डिफेन्डरको रूपमा आफ्नो व्यापार चलाउँछन्।
डायसका दुई सुन्दर बहिनीहरू पनि छन् जसलाई बित्रीज र क्यारोलिना भनिन्छ। दिदीबहिनी निस्सन्देह उसको सबैभन्दा ठूलो प्रशंसक हुन् र उनीहरुसँग पहिचान गर्न सँधै गर्व गर्छन्। यहाँ क्यारोलिना (बायाँ) र बियत्रिज (दायाँ) छ - बाँकी स्पष्ट रूपमा चिन्न सकिन्छ। निस्सन्देह, रुबेन डायस परिवारको आफैंमा एक रोटी जम्मा गर्ने व्यक्ति छ।
रुबेन डायस सम्बन्धका बारे:
डायसको आणविक पारिवारिक जीवनबाट टाढा, उनका पुर्खाहरूको बारेमा कुनै जानकारी छैन। विशेष रूपमा यो आफ्नो मातृ र बुवा हजुरबा हजुरआमालाई चिन्ता गर्दछ। त्यस्तै, उसको काकी, काका, काका, काका, भान्जा र भान्जीहरू बारे थोरै जानकारी अवस्थित छ।
रुबेन डायस व्यक्तिगत जीवन:
रुबी फुटबलको बाहिर रमणीय र सम्मानित व्यक्ति हुन्। माथि उल्लिखित व्यक्तिगत लक्षणहरू उसको साथ हुनको लागि रमाईलो गर्न। उहाँ पौडी खेल्नको लागि एक चुसा हुनुहुन्छ र यात्रा मन पराउनुहुन्छ। उसको शौक र रुचिहरूको सूचीमा थपियो गितारको तारहरू छिटो। उनको प्रेमिकाले गाउँदा उसको अद्भुत गितार सीप देखाउँदै गरेको यस भिडियोलाई हेर्नुहोस्।
रुबेन डायस निजी जीवन
यो २०२० मा डिफेन्डरको नेटवर्थ र उसको खर्च बान्कीको बारेमा कुरा गर्न हामीलाई सुन्दर बनाउँछ। सब भन्दा पहिले कुरा, २०२० मा रुबेन डायसको कुल सम्पत्ति $ १००,००० हो (अनुमान)। उसको कुल सम्पत्ति कसैलाई पनि ठूलो सम्झनु हुँदैन किनभने उनको म्यानचेस्टर शहर मा वार्षिक वेतन १,१2020,००० भन्दा माथि छ।
ठूलो पैसाको साथ ठूलो खर्च गर्ने प्रवृत्ति आउँदछ, र डायस त्यो सम्मानको अभाव हो। नाइकको प्रायोजनको आनन्द लिने फुटबल मास्ट्रोसँग विदेशी कारहरू छन्। कारहरूले कुनै श doubt्का छोड्दैनन् कि उनी महँगो घर / अपार्टमेन्टमा बस्छन् ग्यारेजको लागि पर्याप्त ठाउँको साथ। नाइक प्रायोजन एक चीज हो जुन उनलाई लक्जरीको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
रुबेन डायसका बारे तथ्यहरू:
यस बायोमा अन्त्य ल्याउन यहाँ डिफेन्डरको बारेमा थोरै वा कम ज्ञात तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १- शहरको तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
प्रति महिना £ 412,300
प्रति हप्ता £ 95,000
प्रति दिन £ 13,571
प्रति घण्टा £ 565.4
प्रति मिनेट £ 9.4
प्रति सेकेन्ड £ 0.15
यो के हो तपाईले यस बायो हेर्न सुरु गर्नु भएदेखि रूबेन डायसले कमाएको छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत British 538.98 British.53जीबीपी / हप्ता कमाउने बेलायतीले en महिना र weeks हप्ता काम गर्नु पर्छ रुबेन डायस साप्ताहिक salary ,95,000, ००० जीबीपी तलब कमाउन।
डिफेन्डर सम्भवतः एक विश्वासी हो जसले ईसाई धर्म अभ्यास गर्दछ। यद्यपि अबु धाबीमा उनको यो फोटोले प्रशंसकलाई उहाँ मुसलमान हो भनेर विश्वास गर्न सक्छ। केही सांस्कृतिक पोशाक हो कि तर्क गर्न हुनेछ। हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा तपाईंको अडान थाहा दिनुहोस्। एक समय, डायसले मुस्लिम मिडिया क्याप्शनको साथ मुस्लिम विश्वासको प्रदर्शन देखाए जुन पढिएको थियो; As-salamu Alaykum।
२ 23 बर्षमा उमेरमा, यो निष्कर्षमा पुग्न सुरक्षित छ कि डायस समग्र FIFA रेटिंग points१ अ of्कको points 81 को सम्भावनाको साथ उचित छ। रेटिंग्सले पक्कै पनि एक meteoric वृद्धि देख्नेछन्, कि अब उनी विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र मनोरन्जन लीग मध्ये एकमा खेल्छन्।
पढाईको लागि धन्यवाद, फेरि फेरी, हाम्रो एक अद्भुत टुक्रा- यस पटक; रुबेन डायसको जीवनीमा। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईंलाई अवसरहरूको लागि आफैंको स्थिति बनाउने आवश्यकताको पाठ सिकायो। डायसले स्वयंलाई एक प्रभावशाली फारमको साथ एक ठूलो चालको लागि स्थान राख्यो जुनबाट रूचिहरू थियो पेप Guardiola जसले उसलाई हस्ताक्षर गरे।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले रुबेन डायसका अभिभावकलाई स्वागत गर्छौं, जो उनीहरूको सहयोगका खाका र स्थिरताको आधारभूत थिए। Lifebogger मा, हामी निष्पक्ष र सही ढ childhood्गले बाल्यावस्थाको कथाहरू र जैव वितरित गर्न यथाशक्य गर्छौं। यदि तपाईं केहि त्यस्तो देख्नुहुन्छ जुन ठीक देखिँदैन, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, तपाई उसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ भन्नेमा तल टिप्पणी दिनुहोस्।
पुरा नाम रुबेन डोस सान्तोस गाटो अल्वेस डायस
जन्म मिति मे १ 14 1997 XNUMX को १th औं दिन
जन्मस्थान पोर्चुगल मा Amadora को शहर
खेल्ने स्थिति रक्षा
आमाबाबुले जोओ डायस (बुबा)
भाई बहिनीहरू इभान, बिट्रियाज र क्यारोलिना
सोख पौंडी, यात्रा र गितार बजाउँदै।
नेट मूल्य $ 100,000
तलब £ 1,144,000 प्रति वर्ष।
प्रेमिका अप्रिल एभिल
पोर्तुगल फुटबल डायरी